Rafitra fananganana banky offshore
Fikirakirana ny Offshore - inona no tokony hatao
Ny dingana voalohany amin'ny fametrahana ny anao banky offshore dia ny miresaka momba ny zavatra ilainao amin'ny matihanina efa za-draharaha. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny telefaona na an-tserasera. Amin'ny fomba manokana dia azonao atao ny mampiasa ny isa na ny pejy eto amin'ity pejy ity ho an'ny fifandraisana mivantana amin'ny mpanoro hevitra.
Noho izany, azontsika atao ny manarona ny fampahalalana ilainao mba hananganana kaonty amin'ny banky any amin'ireo faritany malaza. Ny ekipanay matihanina dia afaka manome fanampiana amin'ny fanokafana kaonty banky vaovao any amin'ny firenena rehetra.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny ankamaroan'ny banky any ivelany dia mila fampidirana mendrika. Izany dia olona efa misy mifandray amin'ny banky. Soa ihany, ity fikambanana ity dia mpanolotsaina mendrika ho an'ireo andrim-panjakana maro manerana an'izao tontolo izao.
Ny kaonty banky vahiny dia manondro kaonty banky ao amin'ny faritra iray izay tsy mpisava lalana na mponin'ny kaonty ny mpampiasa. Matetika dia lazainay amin'ireny fanjakàna ireny ho fialofana amin'ny banky noho ny fampiharana henjana ny fiainana manokan'ny mpanjifa. Rehefa manokatra kaonty banky any amoron-tsiraka any amin'ireto teratany vahiny ireto dia mahazo tsiambaratelo ara-bola.
Noho izany, ahoana no hanamafisanao ny fiainana manokana? Raha tsorina dia matetika ny mpanjifantsika no manokatra ny kaontiny vaovao amin'ny anaran'ny orinasa tsy miankina any ivelany izay apetrakay. Ny antony voalohany amin'ny fanokafana ny kaontin'ny banky any ivelany dia ny tsiambaratelo sy ny fiarovana ny fananana. Misy tombony fanampiny toy ny drafi-bola momba ny hetra ary koa ny fampiasam-bola iraisam-pirenena sy ny asa aman-draharaha. Ireo tombontsoa ireo matetika dia mitaky ny asa ara-dalàna araka ny lalàna toa ny offshore LLC. Ny tena malaza sy mahasoa an'ireo mitady fiarovana sy ny fiarovana ny fananana dia ny Nevis LLC.
Ahoana no hanokafana kaonty any ivelany?
Ny banky any Moat dia manana fepetra mitovy amin'izany rehefa manokatra kaonty. Manao izany ny banky mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tafiditra ao ny fampahalalana momba anao, ny famantarana ary ny tahiry voalohany. Miankina amin'ny rafi-bolanao, ny banky dia mety mangataka aminao ny dika mitovy amin'ny pasipaoronao, ny referrisy ary ny porofon'ny trano fonenana. Azonay manokatra ny varavarana amin'ireo banky vahiny matanjaka indrindra manerantany. Noho ny traikefa be dia be sy ny halavam-piainana ao an-tsaha, izahay dia afaka mampiditra fampahafantarana amin'ireo banky lehibe sy matanjaka indrindra any Switzerland.
Voalohany, mamorona orinasa vahiny ianao. Avy eo, manokatra ny kaontin'ny banky ianao amin'ny anaran'ny orinasa. Manokatra ny kaontin'ny bankinao any ivelany anao amin'ny anaran'ny orinasa tsy miankina ivelany fa tsy amin'ny anaranao manokana. Rehefa manana fananana amin'ny anaranao mivantana ianao dia kendrena mora kokoa amin'ny raharaha izy ireo.
Ho fanampin'izany, afaka mahazo tombony ara-bola mitombo ianao rehefa mampiasa firenena vahiny roa. Mamorona ny orinasanao amin'ny firenena iray ianao. Avy eo hanokatra ny kaontinao amin'ny bankinao amin'ny toerana hafa ianao. Raha ny tena izy, manararaotra lalàna roa samy hafa amin'ny firenena ianao. Ao amin'ny sehatry ny banky any ivelany izay mahaliana dia heloka lehibe ny manome vaovao ny kaontin'ny mpanjifa amin'ny hafa. Amin'ny faritany hafa dia fanitsakitsahana ny olona ny manome vaovao momba ny tompon'ny orinasa misy anao. Ny orinasan'ny orinasa sy ny fitambaran'ny kaonty amin'ny banky dia iray amin'ireo fomba haingana indrindra hiarovana ny harenao amin'ny maso mihanaka. Raha mila fanazavana fanampiny, vakio, Torolàlana ho an'ny fanombohana eo amin'ny banky eny ivelany, izay ahitanao ny fampahalalana fototra amin'ny banky any ivelany.
Banky fanaraha-maso tsy miankina
Ny kaomisionera momba ny serivisy ara-bola (FSC) na ny fitoviana itoviana ao anatin'io firenena io na faritra dia mifehy ny banky tsirairay. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny Organisation for Cooportation Development et Development (OECD), Vondrona Eropeana ary fikambanana hafa, dia nanolotra tolo-kevitra sy fepetra takiana. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny FSC samihafa mba hampiharana sy ny banky hanaraka.
Ny antony lehibe amin'ireo fitsipika ireo dia ny fitazonana ny fitandremana ny lalàna amin'ny olom-pirenena sy ny mpanao heloka bevava tsy ho ao amin'ny rafi-bola. Izany no antony anaovana fitakiana hentitra hanampiana ny fitrandrahana vola, na hetsika tsy ara-dalàna hafa.
Ireto misy zavatra mahazatra sasany izay ilaina matetika rehefa mandinika offshore bank. Antsoin'ny banky ity fampahalalana ity hoe "fahazotoana mety" na amin'ny fiatrehana ny fepetra takiana "Fantatrao ny mpanjifanao" na ny KYC.
Inona no takian'ny banky?
Ity misy ohatra iray amin'ireo zavatra takiana lalàna.
1. Fampiharana kaonty amin'ny banky.
2. Karatra famantarana
3. Fandefasana kopian'ny pasipaoro notorina
4. Porofon'ny adiresy, toy ny volavolan-dalàna
5. Banky Fanoratana taratasy avy amin'ny banky izay nahitana olona manan-danja teo amin'ny banky nandritra ny roa taona farafahakeliny
6. Professional Reference Letter from Accountant / Attorney, with which person has relevant relations with for at least two years
Tsy midika akory izany lisitra mandreraka izany. Ny FSC sy ny OECD ary ny banky mihitsy, dia mety manana fepetra fanampiny. Averina indray, izany rehetra izany dia natao hitandroana ny fahitsiana sy ny maha-ara-dalàna ny rafitra banky ary hanampy amin'ny fisorohana ny asan-jiolahy. Ny tompon'andraikitry ny banky dia hanara-maso akaiky ireo antontan-taratasy ireo ary hanao antso an-tariby mba hanomezana toromarika mety aminao.
Ohatra, tian'izy ireo hanamarina ny trano fonenanao. Noho izany dia mila porofo vitsivitsy ianao, toy ny volavolan-dalàna momba ny fitaovana iray amin'ny anaranao. Miankina amin'ny toetran'ny antontan-taratasy rehetra, ny fanamafisana dia mety hanaporofoana fa ilaina. Ny firenena sasany koa dia mety mitaky endrika famantarana maromaro alohan'ny hanokafana ny kaonty.
Rehefa manokatra kaonty any ivelany ianao dia afaka manakarama matihanina manampy anao hanao izany. Ny fikambananay, ohatra, dia manome ity serivisy ity. Raha tsy izany, mila mikaroka ireo fepetra takiana isaky ny fizaram-pahefana na didin'ny banky ianao. Quora tombanana momba izany 14,600 banky an'izao tontolo izao. Noho izany, raha tsy hoe be dia be ny tananao, dia hiombon-kevitra ny ankamaroany fa tsara ny hahazo fanampiana.
Referansa sy tahirin-kevitra
Raha ny momba ny banky momba ny banky, ny banky amoron-dranomasina dia mety mila fanaporofoana ny mahasambatra eo aminao sy ny bankinao. Mety mila fampahalalana toy ny fifandanjana isan'andro. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, tokony ho ampy ny fanambaran'ny banky enim-bolana mandritry ny herintaona. Ny banky an-trano ihany koa dia afaka manome taratasy fanamarinana hanamarina fa mpanjifanao manana toerana tsara ianao.
Ny banky any ivelany dia mety maniry ny fampahalalana momba ny toetra sy ny karazan-trafika izay kasainao hitondrana azy. Nihazona ny fanerena ny banky hampiato ny famotsiam-bola sy asa ratsy hafa. Noho izany, dia angatahina amina tahirin-kevitra fanampiny izany mba hahitan'ny andrim-panjakana ny loharanom-bola famatsiam-bola ao amin'ilay kaonty. Raha tsy manao izany izy ireo dia afaka mizaka onitra na fatiantoka amin'ny fahazoan-dàlana ara-bola. Noho izany, aza manantena izy ireo fa hanao fampidinana manokana ho anao.
Ny teny Anglisy dia fiteny ofisialy ao amin'ny firenena izay kasainao hanokatra ny kaontinao any amin'ny banky? Raha tsy izany, dia mety ho voatery manome fandikan-teny voamarina amin'ny taratasinao amin'ny fiteny ofisialy ianao.
Araka ny hitanao dia ny fomba fanamboarana kaonty offshore dia hafa noho ny fanokafana kaonty ao an-trano. Ny ankamaroan'ny banky dia mitaky anao hampiseho azy manokana. Soa ihany, fantatsika ireo tsy manao izany. Ireo izay tsy mitaky dia dia mitaky antontan-taratasy fanampiny hanaporofoana fa ianao no miteny hoe iza ianao. Natao ho tombontsoanao izany. Izany dia satria rehefa misava mangataka ny volanao ianao dia fantatrao fa handany anao fotsiny izany; tsy misy milaza azy ireo fa ianao. Araka izany, amin'ny alàlan'ny fanolorana karatra mety ho eo anoloanao, dia ho fantatrareo sy ny banky fa tena ianao tokoa.
Satria ny rafitra dia samy hafa amin'ny banky sy ny firenena, zava-dehibe ny manazava ny olana sasany alohan'ny hanokafana ilay kaonty. Te hahafantatra ianao hoe aiza no misy fameperana amin'ny famindrana vola be. Noho izany, te hahafantatra ny fomba amam-panaovana izany ianao. Ho tianao koa ny hahalalanao raha miasa amin'ny banky ny banky debit amin'ny banky iraisam-pirenena. Moa ve izy io miasa ho an'ny fividianana antsinjarany sy amin'ny ATM? Fantaro raha afaka mampiasa ny karatra debitinao ianao mba handoavana ireo entana sy serivisy an-tserasera.
Ny tahan'ny zanabola izay atolotry ny banky any ivelany dia avo kokoa noho ny omen'ny banky amerikana. Ny rafitry ny sarany dia mety ho somary avo kokoa ihany koa. Ampahany amin'ny fanatontosana ny zotram-po dia mandinika ny vola rehetra aloa amin'ny banky. Raha tsy mikasa ny hanao famindrana betsaka ianao, ny sarany dia mety tsy hitovy be; nefa afaka mampiditra kaonty banky mavitrika izy ireo.
Raha vao misokatra ny kaontinao
Vantany vao namolavola anao ny orinasa banky offshore antontan-taratasy fananganana, mazàna izy ireo dia mandefa ny fanamafisana aminao aminao amin'ny alàlan'ny mailaka. Amin'izany fotoana izany dia hiandry famindrana tariby ny banky. Raha vao mahazo ny takam-bolany voalohany izy ireo dia hampiasa ny kaontinao vaovao. Ny fandoavam-bola sasany dia misy ny saram-panokafana, karatry ny banky fanampiny (raha ilaina), ny courier ary ny fandaniana hafa. Indray, ireo dia miovaova eo anelanelan'ny mpanome kaonty amin'ny banky ivelany.
Vantany vao mavitrika ny kaontin'ny banky, dia mahazo fidirana an-tserasera ianao hamoronana ny kaonty mpampiasa sy ny tenimiafinao. Azonao atao ihany koa ny mandray zavatra toy ny fitaovana famantarana nomerika mora ampiasaina. Rehefa azonao izany dia mety hahita fitaovana nomerika mamokatra kaody azo antoka ianao hampidirana ny fifandanjan'ny kaontinao. Miaraka amin'ny ankamaroan'ny banky ianao dia afaka manao fifanakalozana haingana, mora, mitokana ary azo antoka. Noho izany, ny fampandehanana ny kaontinao sy ny fampiasana an-tserasera dia mahatonga azy ho tena mitovy amin'ny fampiasana banky hidina eny an-dalambe.
Inty ny fanampiana
OffshoreCompany.com dia nanampy olona an'arivony eran'izao tontolo izao hanangana kaonty any ivelany. Ho fanampin'izany, manampy izahay hanangana kaonty amin'ny fiantohana takelaka. Ankoatr'izay, ity fikambanana ity dia iray amin'ireo orinasa lehibe izay manome drafi-piarovana ny fananana. Noho izany, mpamatsy atokisana izahay izay manana fifandraisana amin'ny fanapahana any ivelany. Raha te-handray anjara amin'ny banky any ivelany ianao, dia ataovy izay hahafantaranao ny fanapahan-kevitrao. Izany no azonay atao hanampiana anao.
Tombontsoa momba ny kaonty vahiny
Matetika ny banky any ivelany dia manolotra zana-bola mahaliana kokoa amin'ny banky amerikana sy Kanada. Betsaka koa ny manolotra serivisy kaonty fitantanana mitantana vola. Ny fametrahana tsiambaratelo dia tombony amin'ny banky any ivelany. Ny iray hafa dia ny fahafahana hahazo fampiasam-bola avy any ivelany. Ny fametrahana kaonty banky sy ny fitaovana fiarovana ny fananana dia fomba iray ahafahana miaro tena amin'ny lafiny ara-bola. Raha manana kaonty offstore amin'ny anaranao fotsiny ianao dia tsy voaaro. Izany hoe, ny mpitsara eo an-toerana dia afaka manome baiko anao hamerina ny vola. Mihazona ny latabatra anefa ny fitazonana ny kaontinao any amin'ny offshore LLC na ny fiarovana ny fananana. Ny fanaovana izany dia mety hisakana ny mpisolovava ny mpifaninana tsy handroba ny kaontinao.
Banky any ivelany, ny tsipika ambany
Ny kaonty Banky Overseas dia midika fotsiny, ny banky miaraka amina andrim-panjakana miorina amin'ny firenena iray hafa noho ny anao. Ny banky any ivelany ho an'ny Amerikanina mazàna dia midika fialokalofana ara-bola azo antoka sy malaza. Anisan'ireo fitsangatsanganana ireo ny Soisa, ny Nosy Cayman, Belize ary Luxembourg. Noho izany.
Araky ny efa nambarantsika dia ny fampiasanao kaonty banky any ivelany dia mitovy amin'ny fampiasana kaontinao ao an-trano. Izany hoe, azon'ny banky any ivelany mora foana amin'ny alàlan'ny milina ATM sy ny fitantanana ny kaonty amin'ny Internet.
Kaonty Banky any ivelany miaraka amin'ireo andrim-bola matanjaka sy matanjaka indrindra eran-tany. Ampiasao ny iray amin'ireo laharana an-telefaona na fakan-kevitra feno momba ny fizahana hevitra eto amin'ity pejy ity raha mila fampahalalana bebe kokoa.
Tombontsoa amin'ny Banky any ampitan-dranomasina
Fiarovana amin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny lalàna
Manokatra ny varavarana mankany amin'ny fampindramam-bola madinidinika
Torohevitra lehibe indrindra
Ity misy tenda lehibe iray izay hanampy anao hampitombo ny tsiambaratelo ara-bola sy ny fiarovana ny fananana. Izany hoe, Manokatra kaonty banky any ampitan-dranomasina amin'ny anaran'ny orinasa afrikana. Manome fahamafisan'ny tsiambaratelo ara-bola be izany. Misy fomba maromaro hampitomboana ny fiainanao manokana ary hiarovana ny fanananao. Manambatra fotsiny ny kaonty, ny orinasa sy ny fitokisana amin'ny banky any ivelany. Ohatra, ny lalàn'i Nevis LLC dia manolotra fiarovana amin'ny fananana matanjaka indrindra amin'ny LLC amin'ny heviny. Ankoatra izany, ny lalàna momba ny raharaha dia manondro ny Cook Cook Trust ho fitaovana mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny fananana any ivelany.
Araka ny fantatrao dia tsy mbola manan-danja kokoa ny fiarovana ny harenao sy ny toe-bolanao. Soa ihany, afaka mankafy ny fiainana manokana sy fiara fiarovana fiarovana amin'ny fananana azo antoka indrindra any amin'ny faritany tsy voaaro indrindra ianao. Ireo mpamatsy toa anay dia mandrafitra orinasa an'habakabaka an'arivony ary matoky ny mpanjifany isan'andro. Ny tompony vaovao, kosa, dia mametraka vola an-tapitrisany dolara ao amin'ny kaontin'ny banky any ivelany isan-taona. Ho fampidirana ho an'ny banky matanjaka indrindra any Switzerland, ity fikambanana ity dia nanampy ny olona an'arivony tamin'ny banky tany ivelany. Izany hoe, ity fikambanana ity dia manampy azy ireo hanokatra kaonty any ivelany. Noho izany, azonao atao ny manokatra azy ireo amin'ny taham-pivarotana ambany kokoa raha misy matihanina za-draharaha mitarika ny lalana.
The IRS hetra amin'ny vahoaka amerikana amin'ny vola miditra manerantany. Noho izany, aza antoka fa mitady tari-dalana amin'ny CPA izay afaka manome torohevitra hetra aminao ianao. Mitady fomba ara-dalàna hiarovana ny fananana ve ianao? Moa ve ianao miasa amin'ny endrika etika sy mifanaraka amin'ny ara-dalàna? Raha izany no izy dia aza misalasala mampiasa ny isa na ny endriny omena amin'ity pejy ity.
Tanjona ara-dalàna fotsiny
Ny etsy ambony dia voalaza miaraka amin'ny fahatakarana fa ny orinasa sy ny kaonty amin'ny banky dia ampiasaina amin'ny tanjona ara-dalàna ihany. Amin'ny ankapobeny, ny olona amerikana dia hetra amin'ny vola miditra manerantany. Noho izany, fiarovana ny fananana amin'ny lozabe, vexatious litigants azo ekena amin'ny ankamaroan'ny tranga. Saingy tsy ny tanjon'ity lahatsoratra ity ny fanalavoana ny hetra na ny fampiasana ny etsy ambony mba hiarovana vola tsy ara-dalàna. Araka izany, heverinay fa olona mitana ny lalàna ianao manana finiavana. Raha eny, ny fampiasana ny serivisy etsy ambony dia mety hanome ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny fanananao izay tadiavinao.
<Ho an'ny toko 7
Ho an'ny toko 9>